Iindaba -Ixesha elide leTeknoloji ye-Bamboo Co, Ltd. Ingxelo yoXanduva lweNtlalontle
Kwi-2020, i-Long Bamboo Technology Group Co., Ltd. (ebizwa apha njenge "Inkampani") iya kuqhubeka nokuhambelana nefilosofi yeshishini yeendleko eziphantsi, ungcoliseko kunye nomgangatho ophezulu. Ngelixa ulandela izibonelelo zoqoqosho, ikhusela amalungelo asemthethweni kunye nomdla wabasebenzi, iphatha abathengisi kunye nabathengi ngentembeko, ibandakanyeka kukhuseleko lokusingqongileyo, ulwakhiwo loluntu kunye nezinye izinto zentlalontle yoluntu, ikhuthaza ulungelelwaniso nolungelelwaniso lwenkampani ngokwayo kunye noluntu , kwaye izalisekise uxanduva lwayo kwezentlalo. Ingxelo yokusebenza kwenkampani kwintsebenzo yoluntu ngo-2020 imi ngolu hlobo lulandelayo:
1. Yenza intsebenzo elungileyo kwaye uthintele umngcipheko wezoqoqosho
(1) Yenza intsebenzo elungileyo kwaye wabelane ngeziphumo zeshishini kunye nabatyali mali
Ulawulo lwenkampani luthatha ukudalwa kokusebenza okuhle njengenjongo yalo yeshishini, yonyusa ulawulo lweshishini, yonyusa iindidi zemveliso kunye neentlobo, iphucula umgangatho wemveliso, iyaqhubeka nokuphonononga imakethi yamanye amazwe yefanitshala yoqalo, kunye nemilinganiselo yemveliso kunye nentengiso ibetha into entsha phezulu. Kwangelo xesha, ifakela ukubaluleka kokukhusela iimfuno ezisemthethweni zabatyali mali ukuze abatyali zimali babelane ngokupheleleyo ngeziphumo zenkampani.
(2) Ukuphucula ulawulo lwangaphakathi kunye nokuthintela umngcipheko wokusebenza
Ngokweempawu zeshishini kunye neemfuno zolawulo, inkampani iseke inkqubo yolawulo lwangaphakathi, iseke inkqubo yolawulo olungqongqo kwindawo nganye yolawulo lomngcipheko, kunye nokuphuculwa kwemali, ukuthengisa, ukuthengwa kunye nokubonelelwa, ulawulo lweeasethi oluzinzileyo, ulawulo lohlahlo-lwabiwo mali, ulawulo lwetywina, ubalo ulawulo lolwazi, njl. Uluhlu lweenkqubo zolawulo kunye nemisebenzi yolawulo efanelekileyo yenziwe ngokufanelekileyo. Kwangelo xesha, indlela efanelekileyo yokujonga esweni iyaphucuka ukuqinisekisa ukuphunyezwa ngempumelelo kolawulo lwangaphakathi lwenkampani.
2. Ukukhuselwa kwamalungelo abasebenzi
Kwi-2020, inkampani iya kuqhubeka nokuhambelana nomgaqo "ovulekileyo, ongenamkhethe nolungileyo" kwingqesho, iphumeze umxholo wezabasebenzi wokuba "abasebenzi yeyona nto iphambili kwinkampani", uhlala ubeka abantu phambili, ubahloniphe ngokupheleleyo kwaye uyabaqonda kwaye ubakhathalele. abasebenzi, bathobele ngokungqongqo kwaye baphucula ingqesho, uQeqesho, ukugxothwa, umvuzo, uvavanyo, ukunyuselwa, amabhaso kunye nezohlwayo kunye nezinye iinkqubo zolawulo lwabasebenzi ziqinisekisa uphuhliso oluzinzileyo lwabasebenzi benkampani. Kwangelo xesha, inkampani iyaqhubeka nokuphucula umgangatho wabasebenzi ngokuqinisa uqeqesho lwabasebenzi kunye nemfundo eqhubekayo, nangeendlela zenkuthazo zokugcina iitalente eziqaqambileyo kunye nokuqinisekisa uzinzo kubasebenzi. Ukuphunyezwa ngempumelelo kwesicwangciso sobunini bempahla yabasebenzi, kukhuthaze ihlombe kunye nokumanyana kwabasebenzi, kwaye kwabelwana ngesihloko sophuhliso lweshishini.
(1) Ukuqeshwa nokuphuhliswa koqeqesho lwabasebenzi
Inkampani ifumana iitalente ezibalaseleyo ezifunwa yinkampani ngeendlela ezininzi, iindlela ezininzi, kunye nokujikeleza konke, ukuphathwa kolawulo, iteknoloji, njl. Kwinkqubo yomsebenzi, inkampani iqulunqa izicwangciso zoqeqesho zonyaka ngokweemfuno zomsebenzi kunye neemfuno zomntu, kwaye iqhuba iindlela zokuziphatha eziqeqeshelweyo, ulwazi lokulawulwa komngcipheko kunye noqeqesho lolwazi lobungcali kuzo zonke iintlobo zabasebenzi, kwaye iqhuba uvavanyo ngokudibeneyo neemfuno zovavanyo. Zama ukufikelela kuphuhliso olufanayo kunye nenkqubela phambili phakathi kwenkampani nabasebenzi.
(2) Umsebenzi wezempilo nokhuselo lokhuseleko kunye nemveliso ekhuselekileyo
Inkampani isungule kwaye yaphucula inkqubo yezokhuseleko yezabasebenzi nezempilo, yasebenza ngokungqongqo ukhuseleko lwabasebenzi kunye nemimiselo nemigangatho yezempilo, inikezela ngokhuseleko kwezabasebenzi kunye nemfundo yezempilo kubaqeshwa, iququzelele uqeqesho olufanelekileyo, yenza izicwangciso ezingxamisekileyo ezifanelekileyo kunye nokwenza uqheliso, kwaye yanikezela ngokugqibeleleyo kwaye ngexesha elifanelekileyo ukhuseleko lwabasebenzi. , Kwaye kwangaxeshanye komeleze ukukhuselwa kwemisebenzi ebandakanya iingozi zasemsebenzini. Inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu kukhuseleko kwimveliso, ngenkqubo yemveliso yokhuseleko evakalayo ehambelana nemigaqo kunye nemigangatho yesizwe kunye neyeshishini, kwaye iqhuba uhlolo kwimveliso yokhuseleko rhoqo. Kwi-2020, inkampani iya kwenza imisebenzi eyahlukileyo eyahlukileyo, ibambe izicwangciso ezahlukeneyo zokuphendula kwimeko engxamisekileyo nokhuseleko, yomeleze ulwazi lwabasebenzi ngemveliso ekhuselekileyo; ukukhuthaza umsebenzi wokhuseleko kuphicotho-zincwadi lwangaphakathi, Ukukhuthaza umsebenzi wokhuseleko wenkampani kulawulo oluqhelekileyo, ukuze kungabikho ziphumo zinqabileyo emsebenzini wokhuseleko lwangaphakathi lwenkampani.
(3) Isiqinisekiso sentlalontle sabasebenzi
Inkampani iyaphatha kwaye ihlawule i-inshurensi yomhlala-phantsi, i-inshurensi yezonyango, i-inshurensi yokungaqeshwa, i-inshurensi yokulimala emsebenzini, kunye ne-inshurensi yokubeleka kubasebenzi ngokweemfuno ezifanelekileyo, kwaye ibonelela ngokutya okunesondlo. Inkampani ayiqinisekisi kuphela ukuba inqanaba lomvuzo womqeshwa lingaphezulu komgangatho ophakathi wasekhaya, kodwa ikwonyusa ngokuthe ngcembe umvuzo ngokwenqanaba lenkampani, ukuze bonke abasebenzi babelane ngeziphumo zophuhliso lweshishini.
(4) Khuthaza imvisiswano nozinzo kubudlelwane babasebenzi
Ngokuhambelana neemfuno zemigaqo efanelekileyo, inkampani iseke umbutho wabasebenzi ukuze bakhathale kwaye baxabise iimfuno ezifanelekileyo zabasebenzi ukuqinisekisa ukuba abasebenzi banamalungelo apheleleyo kulawulo lweshishini. Kwangelo xesha, inkampani ibambelela kubaluleko olukhulu kukhathalelo lwabantu, yomeleza unxibelelwano kunye notshintshiselwano nabasebenzi, ityebisa imisebenzi yenkcubeko kunye nemidlalo yabasebenzi, kwaye yakha ubudlelwane obuhambelanayo nobuzinzileyo babasebenzi. Ukongeza, ngokukhethwa kunye nomvuzo wabasebenzi ababalaseleyo, ihlombe labasebenzi lihlanganisiwe, ukwamkelwa kwabasebenzi kwinkcubeko yeenkampani kuphuculwe, kwaye amandla enkampani ayaphuculwa. Abasebenzi benkampani bakwabonakalise umoya wobumbano kunye nokuncedisana, kwaye bandise isandla xa abasebenzi behlangabezana nobunzima ukunceda boyise ubunzima.
3. Ukukhuselwa kwamalungelo nomdla wabanikezeli kunye nabathengi
Ukuqala kubude beqhinga lophuhliso lwenkampani, inkampani ihlala ibeka ukubaluleka okukhulu kuxanduva lwayo kubanikezeli kunye nabathengi, kwaye ibaphatha abathengisi kunye nabathengi ngentembeko.
(1) Inkampani iqhubekeka ukuphucula inkqubo yokuthengwa kwempahla, iseke inkqubo enobulungisa nefanelekileyo yokuthenga, kwaye idale imeko efanelekileyo yokukhuphisana nababoneleli. Inkampani iseke iifayile zabanikezeli kwaye igcina ngokungqongqo kwaye izalisekisa izivumelwano zokuqinisekisa amalungelo asemthethweni kunye nomdla wabanikezeli. Inkampani yomeleza ukusebenzisana kweshishini kunye nabanikezeli kwaye ikhuthaze uphuhliso oluqhelekileyo lwamacala omabini. Inkampani ikhuthaza ngenkuthalo umsebenzi wophicotho-zincwadi zabanikezeli, kwaye ukubekwa emgangathweni kunye nokubekwa emgangathweni komsebenzi wokuthenga kuphuculwe ngakumbi. Kwelinye icala, iqinisekisa umgangatho weemveliso ezithengiweyo, kwaye kwelinye icala, ikwakhuthaza ukuphuculwa kwenqanaba lolawulo lomthengisi.
(2) Inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu kwimveliso esemgangathweni yemveliso, ilawula ngokungqongqo umgangatho, iseka inkqubo yexesha elide yolawulo lwemveliso kunye nenkqubo ebanzi yolawulo lomgangatho, kwaye ineziqinisekiso ezifanelekileyo zeshishini lokuvelisa. Inkampani ihlola iimveliso ngokungqinelana ngokungqongqo nemigangatho yokuhlola kunye neenkqubo. Inkampani idlulile kwinkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001, inkqubo yolawulo lokusingqongileyo ye-ISO14001, kunye ne-ISO45001 yenkqubo yempilo yokhuseleko nokhuseleko. Ukongeza, inkampani ipasile izatifikethi ezininzi ezinegunya kwilizwe liphela: Imveliso ye-FSC-COC kunye nentengiso yokugcinwa kwezatifikethi, uphicotho-zincwadi lwezentlalo lwaseYurophu kunye nokunye. Ngokufezekisa imigangatho engqongqo esemgangathweni kunye nokwamkela amanyathelo obuchule wokulawula umgangatho, siya komeleza ulawulo lomgangatho kunye nokuqinisekisa kuyo yonke imiba ukusuka kumgangatho wokuthengwa kwempahla eluhlaza, inkqubo yolawulo lwemveliso, ulawulo lwekhonkco lokuthengisa, iinkonzo zobugcisa emva kokuthengisa, njl., Ukuphucula umgangatho wemveliso kunye umgangatho wenkonzo, kunye nokubonelela abathengi ukuze ufezekise iimveliso ezikhuselekileyo kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu.
4. Ukhuselo lokusingqongileyo kunye nophuhliso oluzinzileyo
Inkampani iyazi ukuba ukhuseleko kwindalo esingqongileyo lolunye loxanduva kwezentlalo. Inkampani ibona kubaluleke kakhulu ekuphenduleni kubushushu behlabathi kwaye iqhuba ngokungqinisisa ukungqinisisa ukukhutshwa kwekhabhoni. Ukukhutshwa kwekhabhoni kwi-2020 kuya kuba yi-3,521t. Inkampani ibambelela kwindlela yemveliso ecocekileyo, uqoqosho olujikelezayo, kunye nophuhliso oluhlaza, ishenxisa amandla aphezulu, ungcoliseko oluphezulu, kunye neendlela zemveliso ezinesakhono esiphantsi, ithatha uxanduva lokugcina imeko yabachaphazelekayo, kwaye ifezekisa uphuhliso oluzinzileyo, ngelixa isebenza Impembelelo kumaqela akwisixokelelwano sonikezelo, Uluqondile uphuhliso lwemveliso eluhlaza yabathengisi abasemantla nabasezantsi kunye nabasasazi beshishini, kwaye uqhube amashishini kwishishini ukuba ngokudibeneyo athathe indlela yophuhliso oluhlaza noluzinzileyo. Inkampani iyiphucula ngenkuthalo indawo yokusebenza yabasebenzi, idala imeko yokusebenza ekhuselekileyo nenentobeko, ikhusela abasebenzi noluntu ekonzakaleni kwaye ikhusela okusingqongileyo, kwaye yakha ishishini langoku eliluhlaza kunye nendalo.
5. Ubudlelwane boluntu nentlalontle yoluntu
Umoya weshishini: ukuvela kunye nokuqhekeka, uxanduva kwezentlalo. Inkampani kudala izinikezele kuphuhliso lwezibophelelo zoluntu, ukuxhasa imfundo, ukunceda ekukhuthazeni uphuhliso loqoqosho lwengingqi kunye neminye imisebenzi yezentlalontle yoluntu. Uxanduva lokusingqongileyo: Iinkampani zilandela indlela yemveliso ecocekileyo, uqoqosho lwesetyhula, kunye nophuhliso oluhlaza ukufezekisa uphuhliso oluzinzileyo. Umzekelo, kwi-2020, iinkampani ziya kwenza izicwangciso zokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokuphuculwa kwendalo esingqongileyo, ukusuka kwizinto ezingasetyenziswanga, ukusetyenziswa kwamandla, "inkunkuma eqinileyo, amanzi amdaka, ubushushu benkunkuma, irhasi yenkunkuma, njl." "Ulawulo lwezixhobo luqhuba kuwo wonke umjikelo wemveliso, kwaye luzama ukwakha uphawu" lokugcina izixhobo kunye nolulungele indalo. "Kwixesha elizayo, inkampani izakuqhubeka nokwandisa utyalo-mali lwayo kuluntu nakwizithembiso zentlalontle yoluntu.
NgoNovemba 30, 2020